Degso AdwCleaner loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (7.80 MB)
AdwCleaner waa xalka amniga oo awood badan oo horumarsan oo ka ilaaliya isticmaalayaasha kumbuyuutarka barnaamijyada xun ee ku wareegaya internetka. Haddii aadan u isticmaalin wax barnaamij antivirus ah kombiyuutaradaada, waxaa waxtar leh inaad iskaankaaga ka baarto kombiyuutarkaaga wixii malware ah adoo iskaasaar ka helaya AdwCleaner waqti ka waqti.
Gabi ahaanba gacantaada ayey ku jirtaa inaad amaan ku ahaato barnaamijkan, kaasoo kaa difaacaya barnaamijyada bedelka bogga, adware, malware, rootkits, virus, trojans, toolkits iyo software kale oo badan oo xun.
AdwCleaner, oo leh interface aad u fudud, sidoo kale waa mid aad u fudud in la isticmaalo oo ay si fudud u isticmaali karaan kombuyuutarrada isticmaala heerarka oo dhan. Barnaamijka, oo ku siinaya dhammaan astaamaha uu ku leeyahay hal shaashad oo keliya, ayaa iskaanka iyo liistada ku qoraya dhammaan barnaamijyada xun ee kombiyuutarkaaga adiga oo hal guji leh.
AdwCleaner, oo ku siinaya xal aad wax ku ool u ah inaad ka takhalusto softiweerka saddexaad ee beddelaya bogga iyo waxyaabaha lagu daro ee beddelaya barta biraawsarkaaga, ayaa soo jiitay mid ka mid ah barnaamijyada amniga ee ay tahay inay ku jiraan kombiyuutaradaada.
AdwCleaner, oo ah mid ka mid ah barnaamijyada ugu wax ku oolka badan ee aad u adeegsan karto inaad ku ilaaliso nabadgelyada kombiyuutaradaada isla markaana aad uga takhalusto barnaamijyada waxyeellada leh, ayaa laguu siiyaa adiga oo bilaash ah.
Cabirka Faylka: 7.80 MB
Wararkii Ugu Dambeeyay: 07-07-2021